​अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासका केही घर भत्काइँदै
काठमाडौं । हवाई व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चार वटा घरको तला थप्ने काममा रोक लगाइएको छ । व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएकै कारण आगामी हप्तादेखि विमानस्थल छेउका ३५ वडाका..
​लाङटाङ सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन वृत्तचित्र प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेको रसुवा जिल्लाको लाङटाङ क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन वृत्तचित्र प्रस्तुत गरिएको छ । राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी सङ्घ नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा..
विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनी विगत चार महिनादेखि ठप्प
रुपन्देही । लुम्बिनी विकास कोषमा राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका तीनजना पदाधिकारीको कामप्रतिको उदासीनता र त्यहाँ कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको आन्दोलनका कारण पवित्र भूमि लुम्बिनी अस्तव्यस्त बनेको छ । विगत चार महिनादेखिको तराई मधेस..
​सत्रौँ पोखरा सडक महोत्सव पुस १३–१७ मा
काठमाडौँ । ‘सडकमै खाऔँ, सडकमै नाचौं र सडकमै रमाऔँ’ भन्ने मूल नाराका साथ यही पुस १३ देखि १७ गतेसम्म १७औँ पोखरा सडक महोत्सव आयोजना हुने भएको हो । पोखराको आन्तरिक तथा..
​पेरिसको लागि उडेको विमान बम राखिएको धम्कीपछि आकस्मिक अवतरण
नैरोबी । विमानमा बम राखिएको धम्कीपछि शनिबार राति केन्याको नैरोबीमा एक विमान आकस्मिक अवतरण गराइएको समाचार छ । सो विमान मौरिससबाट फ्रान्सको राजधानी पेरिसका लागि उडेको थियो । सो विमानमा बम..
​छ महिनाभित्र परिणाम देखिने गरी काम गर्छुः नवनियुक्त सिइओ जोशी
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दीपकराज जोशीले भूकम्पपछि थलिएको मुलुकको पर्यटनलाई पहिलाको अवस्थामा पु¥याउन छ महिनाभित्रै परिणाम देखिने गरी काम गर्ने बताउनुभएको छ । झन्डै चार..
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा दीपकराज जोशी नियुक्त भएका छन् । अन्तिम छनोटमा परेका तीन प्रतिस्पर्धीमा उत्कृष्ठ ठहरिँदै बोर्डका बरिष्ठ अधिकृत रहेका जोशी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत..
काठमाडौँ– पोखरा १७१ किमी विद्युतीय रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
काठमाडौँ । काठमाडौँ–पोखरा १७१ किमी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा चीनको सरकारी कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले आज उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री..
इन्धन अभावका कारण पर्यटक चढ्ने सवारीसाधनमा यात्रुहरु बढे
काठमाडौँ । इन्धन अभावका कारण पछिल्लो समयमा पर्यटकीय सवारी साधनमा यात्रागर्ने क्रम बढेको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीले इन्धन अभाव भएपछि पर्यटक चढ्ने सवारीसाधनमा यात्रागर्ने क्रम बढेको हो । ९० सवारी..
धनगढी, १ पुस । सुदूरपश्चिमको मुख्य तीर्थस्थल कैलाली जिल्लाको गोदावरीलाई धार्मिक पर्यटनको गन्तव्यस्थलको रुपमा विकास गर्न ‘सहश्र कुम्भ दर्शन मेला’को तयारी गरिएको छ । आगामी माघ १ गतेदेखि फागुन १ गतेसम्म..
म्याग्दी । पदयात्राका लागि चर्चित अन्नपूर्ण परिपथ मार्गका पर्यटकीय गाउँहरुमा निःशुल्क ताररहित (वाइफाई) इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरिएको छ । वीरेढाँटी, घान्द्रुक, घोडेपानी र तातोपानीका सबै पर्यटक होटल र रेष्टुरेन्टमा निःशुल्क..
​बाजेको सेकुवाको नयाँ शाखा राजधानीको लाजिम्पाटमा
काठमाडौं । बाजेको सेकुवाले काठमाडौंको लाजिम्पाटमा नयाँ फ्रान्चाइज खोलेको छ । यसअघि नै १० वटा शाखा सञ्चालनमा ल्याइसकेको बाजेको सेकुवाले विहीबारबाट नयाँ फ्रान्चाइज सञ्चालनमा ल्याएको हो । बाजेको भेन्चर अन्तर्गत सञ्चालन..
​विमानस्थललाई पैसा कमाउने माध्यम नबनाउस् पर्यटनमन्त्री, काममा ध्यान दिन कर्मचारीलाई निर्देशन
काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नाफा कमाउने थलोका रुपमा हेर्न नहुने बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न पुगेका पोखरेलले विमानस्थललाई नाफा कमाउने..
निकुञ्ज भ्रमण गर्ने पर्यटकमा कमी, राजस्व पनि घट्यो
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आम्दानी चार महिनामा चार करोड रूपैयाँ बढीले घटेको छ । गएको साउनदेखि कात्तिकसम्म निकुञ्ज घुम्ने पर्यटकको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेकाले राजस्व घट्न पुगेको हो । निकुञ्जका सहायक..
​साझा बसमा स्मार्ट–कार्डको सुरुवात, अब नगद बोक्नु नपर्ने
काठमाडौं । नेपालमै पहिलो पटक साझा बसले आफ्ना यात्रुहरुलाई लक्षित गर्दै स्मार्ट–कार्डको थालनी गरेको छ। बसमा चढ्दा पैसा बोक्नु नपर्ने र सोही स्मार्ट कार्डबाट पैसा चुक्ता हुने गरी यो व्यवस्था..
​पर्यटन बोर्ड विघठन गरेर काउन्सिल बनाउने पर्यटनमन्त्रीको घोषणा
काठमाडौ । सस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री आनन्द प्रसाद पोख्रेलले पर्यटन बोर्डसहित पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका संघ सस्थाहरुलाई विघठन गरेर सबै काम एउटै छाता मुनिबाट हुने गरी पर्यटन काउन्सिल बनाउने..
इन्धन अभावले पाँच दर्जन आन्तरिक उडान रद्द
काठमाडौं । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धन आपूर्ति हुन नसक्दा आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीहरुले आइतबार पाँच दर्जन उडान रद्द गरेका छन् । आन्तरिक उडान गरिरहेका बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स, सिम्रिक..
​३५ वर्षपछि नेपाल वायुसेवा निगमले ४ हेलिकप्टर र ८ जहाज खरिद गर्दै
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले ३५ वर्षपछि फेरि हेलिकप्टर खरिद गर्ने भएको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले सोमबार ४ हेलिकप्टर र ८ नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया थालेको छ ।..
​नाकाबन्दीको विरोधमा महिला पर्यटन व्यवसायीको र्‍याली
काठमाडौं । भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको विरोध गर्दै ठमेलका महिला पर्यटन व्यवसायीले र्‍यालीसहित प्रदर्शन गरेका छन् । महिला पर्यटन व्यवसायीहरु विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनमा सहभागी भए । र्‍यालीमा सहभागी व्यवसायीहरुले..
नेपाल अल्ट्रा म्याराथन’मा स्वीट्जरल्यान्डका पास्कल विजयी
लमजुङ । लमजुङमा सम्पन्न विदेशीमात्र सहभागी ‘नेपाल अल्ट्रा म्याराथन’ प्रतियोगिताको पुरुषतर्फको उपाधि स्वीट्जरल्यान्डका पास्कल मारमियरले जितेका छन् । सय किलोमिटर दुरी १२ घन्टा ३३ मिनेट १८ सेकेन्डमा पार गरेर पास्कल पहिलो..
पर्यटकका गाडी पनि आउन पाएनन् बेलहिया नाकाबाट
लुम्बिनी । रुपन्देहीको बेलहिया सुनौली नाकाबाट पर्यटक सवारी साधन आउन सकेको छैनन् । सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले सीमा नाका बेलहिया बन्द गरेपछि पर्यटक सवार बससमेत आउन सकेका..
सिम्रिक एयरले फ्रान्सबाट २६ करोड रुपैयामा हेलिकप्टर ल्यायो
काठमाडौ । सिम्रिक एयरले एयरबस हेलिकप्टर्स फ्रान्ससँग ३ वटा नयाँ हेलिकप्टर खरिद गर्ने सम्झौता अनुरुप पहिलो हेलिकप्टर नेपाल भित्र्याएको छ। जसअनुसार सिम्रिकले एयरवस फ्रान्सद्वारा निर्मित एच–१२५ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण..
​चिनले बोइङ र एयरबससँग प्रतिस्पर्धा गर्न १६८ सिट क्षमताको विमान बनायो
बेइजिङ । चीनले बोइङ र एयरबसलाई टक्कर दिने गरी पहिलो ठूलो यात्रुवहाक विमान तयार गरेको छ । १६८ सिट क्षमताको यो विमानले ३४ सय मिलको उडान गर्न सक्छ । चीनले..
​नेपाल बायुसेना निगमले २ वटा वाइड बडीको जहाज खरिद गर्ने
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिले वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । समितिको दसैंअघि नै बसेको बैठकले जहाज खरिदका लागि प्राविधिक समिति बनाउने निर्णय गरेको..
म्याग्दीको राहुघाट क्षेत्रका बस्तीलाई समेटेर नयाँ पदमार्ग बन्यो, एक हप्ते यात्रा गर्न सकिने
म्याग्दी । म्याग्दीको राहुघाट क्षेत्रका पर्यटकीय बस्तीहरुलाई समेटेर नयाँ पदमार्गको पहिचान भएको छ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ पदमार्गको पहिचान तथा प्रवर्द्धनमा सघाउँदै आएको अफ द बिट इन्ट्रेक्स र म्याग्दी उद्योग..
पर्वतारोहण संघलाई दिइएको २७ हिमाल सरकारले लियो
काठमाडौं । वि.स. २०३४ सालदेखि मुलुकका २७ वटा हिमालको आरोहण अनुमति र सेवा शुल्क उठाउँदै आएको नेपाल पर्वतारोहण संघको अख्तियारी सरकारले खारेज गरेको छ । तत्कालीन सरकारले पर्वतारोहण संघलाई ३३ हिमालको..
​विजया दशमीको अवसर पारेर होटल सांग्रिलाको ‘दशैं भोज’ प्याकेज
काठमाडौं । नेपालीहरुको महान चाड विजया दशमीको अवसर पारेर पाँचतारे होटल सांग्रिलाले ‘दशैं भोज’ प्याकेज ल्याएको छ । सप्तमी, अष्टमी र दशमी गरी तीन दिनसम्म चल्ने प्याकेजमा मौलिक नेपाली खाना..
​गैर आवासीय नेपाली संघको अध्यक्षमा दोस्रो पटक शेष घले
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको अध्यक्षमा शेष घले दोस्रो निर्वाचित भएका छन् । बिहीबार सम्पन्न संघको सातौं विश्व सम्मेलन मार्फत घले अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । प्रतिद्वन्दी टिबी..
​टान अध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद रिजाल विजयी
काठमाडौं । ट्रेकिङ एजेन्सिज् एशोसियसन अफ नेपाल (टान) को अध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद रिजाल विजयी भएका छन् । अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी सागर पाण्डेलाई ७९ मतले हराउँदै रिजाल विजयी भएका हुन् ।२८ गते..
दशैंमा कसरी जाने घर ? आन्तरिक वायुसेवाका अतिरिक्त उडानका टिकट पनि सकिए
काठमाडौं । आन्तरिक वायुसेवाले दसैंका लागि थपेका अतिरिक्त टिकट पनि सकिएका छन्। नियमित उडानमा रहेका आन्तरिक वायुसेवाले प्रत्येक वर्ष दसैंलाई लक्षित गरी थप उडान सञ्चालन गर्छन। सिम्रक एयरलाइन्सका बजार निर्देशक प्रज्वल..
Results 1994: You are at page 64 of 67